Fomba fanao amin'ny kuliner an'i Frantsa | Vaovao momba ny dia
Fomba fanao amin'ny kuliner any Frantsa
Mariela Carril | | Frantsa, gastronomy
Raha misy fitenenana manao hoe: izay alehanao dia ataovy izay hitanao, Azontsika atao koa ve ny milaza any amin'izay alehanao mihinana izay hitanao ...? Azo antoka! Misisika foana aho fa ny fialan-tsasatra dia tokony ho fialan-tsasatra gastronomic koa ary raha handeha ianao Frantsa, eny, bebe kokoa noho ny gastronomy frantsay Izy io dia iray amin'ireo tsara indrindra eto an-tany.
Inona avy ireo fanao amin'ny sakafo mahandro frantsay? Inona no azonao hanina, aiza, rahoviana, amin'ny fomba ahoana? Andao hojerentsika anio.
France sy ny sakafony
Na iza na iza mahalala izany Tsara ny nahandro frantsay ary amin'ny tranga maro, voadio tanteraka. Izy io dia ampahany amin'ny hatsaran'ny firenena sy ny hajia fizahan-tany ao aminy. Isika rehetra dia namakivaky an'i Paris niaraka tamin'ny dibera sy sandwich ham na nihinana makarona teo amoron'ny Seine. Na zavatra mitovy amin'izany. Nandeha be dia be namakivaky ny lalantsara tao amin'ny fivarotana lehibe aho nahita zava-mahatalanjona, nanandrana matsiro aho mousses sôkôla ary nividy fromazy malefaka tsara tarehy aho ...
Marina fa amin'ny maha mpizahatany anao, raha afaka sy maniry ianao dia afaka misakafo tontolo andro ary manararaotra isaky ny manandrana zavatra isan-karazany, fa ny frantsay kosa mihinana kely kokoa noho ny mpizahatany miasa. Raha ny marina dia misy resaka foana sakafo telo fototra: sakafo maraina, atoandro ary sakafo hariva misy sandwich vitsivitsy eo anelanelany. Amin'ny sakafo lehibe zava-dehibe ny fisian'ny hena, trondro ary akoho amam-borona.
Mifanohitra amin'ny firenena eropeana hafa toa an'i Angletera na Alemana, eto maivana kokoa ny sakafo maraina. Tsy misy saosisy, atody, hena ary matavy be ... Mofo misy kafe o toast na croissant ary amin'izay ianao mahazo misakafo antoandro. ny sakafo maraina misakafo aloha be ianao, alohan'ny handehanana any am-piasana na any am-pianarana. Tsy misy mandany fotoana be dia be amin'ny fandrahoana sakafo maraina, ny fanaovana zava-pisotro mafana sy ny fanaovana zavatra amin'ny mofo haingana.
Avy eo dia tonga ny ora amin'ny sakafo atoandro, avelao izy, adiny iray amin'ny asa maro, izay matetika manomboka amin'ny 12:30 atoandro. Noho izany, raha eny an-dalambe amin'ny tanàna ianao amin'izany fotoana izany dia manomboka mahita olona maro kokoa, milahatra amin'ny fivarotana sakafo entina na mipetraka eo ambony latabatra amin'ny trano fisakafoanana kely. Azo antoka fa tamin'ny fotoana hafa dia nisy fitokanana bebe kokoa tamin'ny sakafo antoandro fa ankehitriny ny fotoana haingana dia manerantany.
Ny sakafo atoandro dia matetika misy taranja telo: starter, main course ary amin'ny dingana fahatelo na tsindrin-tsakafo na fromazy sasany. Mazava ho azy fa sarotra ny tonga amin'ny ora fisakafoanana miaraka amin'ny sakafo maraina sy sakafo atoandro fotsiny izay, rehefa manohy miasa ianao avy eo, mazàna ihany koa maivana. Ka ny frantsay dia mety latsaka ao a goûter, sakafo hariva mitataovovonana miaraka amina kafe na dite. Indrindra ny ankizy, izay afaka mandray izany manomboka amin'ny 4 tolakandro.
Ary avy eo, eo anelanelan'ny sakafo antoandro tolakandro sy ny sakafo hariva, na an-trano izany na amin'ny fisotroana misy eo anelanelan'ny asa sy ny trano, dia mitranga izany ny apéritif. Ny kilasy sakafo rantsan-tànana tokony ho tamin'ny 7 tolakandro. Ho ahy dia tsy misy na inona na inona manaikitra manaikitra avy amin'ny fanapahana mangatsiaka, miaraka amin'ny voankazo maina, fromazy sy voaloboka samihafa. Apéritif tiako indrindra.
Ary noho izany dia tonga izahay sakafo hariva, ianao fisakafoanana, izay ho an'ny tsiriko dia somary aloha satria mety milamina eo anelanelan'ny 7:30 sy 8 alina, miankina amin'ny fandaharam-potoanan'ny fianakaviana. Io no sakafo manan-danja indrindra amin'ny andro, mianakavy, milamina, resaka sy fihaonana. Raha manan-janaka kely ny fianakaviana dia mety omena sakafo mialoha izy ireo ary aorian'ny sakafo hariva dia an'ny olon-dehibe ihany. Tsy mety tsy hita ny divay.
Miasa ora hafa ny trano fisakafoanana, mazava ho azy, fa afaka misakafo hariva amin'ny 8 ianao, na dia ny fisakafoanana amin'ny misasakalina aza dia azo atao farafaharatsiny any amin'ireo tanàna lehibe kokoa. Amin'ny ora fisakafoanana dia tsy izany satria matetika ny trano fisakafoanana manakaiky ny sakafo antoandro sy ny sakafo hariva ka tsy mety ny mikasa ny hisakafo any ivelany aorian'ny 2 tolakandro.
Ao amin'ireto fadin-tsakafo mahandro frantsay ireto dia misy pitsopitsony: ny frantsay mividy akora fa tsy sakafo; Mahandro be ao an-trano izy ireo miaraka amin'ny akora vaovao, mandamina ny menio ary mipetraka mba hankafy azy io miaraka amin'ny ankohonany na ny namany. Tsy misy mieritreritra ny hividy zavatra amin'ny masinina iray ary hihinana azy eo akaikiny, na mitsako paoma eo akaikin'ny fantsakana, na mihinana mitsangana eo amin'ny tokotanin'ny lakozia.
Aza mieritreritra na inona na inona mihoatra ny kajy Manerana ny firenena dia manodidina ny 32 10 ny mpivaro-mofo ary baguette XNUMX tapitrisa eo no amidy isan-taona... Mpankafy mofo be ny Frantsay ary raha ampiarahina amin'ny akora tsotra hafa, toy ny fromazy sy divay, dia manana lovia tsy hay hadinoina izy ireo.
Nilaza izahay talohan'io fa ny lanjan'ny hena dia toy izany no ao anaty lovia toa ilay malaza Boeuf Bourguignon, ny tongotry ny zanak'ondry sy ny henakisoa Toulouse style. Ny hena hafa dia akoho sy gana, hita ao anaty lovia be mpitia toa ny Akoho Dijon, namboarina tamin'ny divay, na ny gana miaraka amin'ny voasary, ilay vorontsiloza misy walnuts na gisa voapaika izay kilalao Krismasy.
Raha ny trondro dia tadidio fa manana morontsiraka an-dranomasina an'arivony kilometatra i Frantsa, noho izany dia manana indostrian'ny jono manan-danja ao Atlantika sy Mediteraneana izy. Misy izany Salmon (salmon en papillote, tuna (voanio Provençal tuna), espadon à la Nicoise na lovia nandrahoana udang, akamako, sombin-kazo ary monkfish. Misy ihany koa ny lokam-baravarana sy ny akofa.
Maso izay I Frantsa koa dia tany misy tsaramaso kafe sy kafe… Tian'ireo mponina eo an-toerana ny mankeny cafe ary mipetraka eo ivelany ary mijery izao tontolo izao mandalo. Ny fanao irery na miaraka, ny famakiana gazety na ny fandinihana fotsiny ny fihavian'ny olona sy ny fombany dia fanao efa an-jato taonany.
Ny marina dia tsy misy isalasalana fa ny frantsay dia mihevitra ny mahandro sy misakafo filana roa ary noho izany, raha mifindra manodidina ny firenena ianao dia hahita lovia isam-paritra mahafinaritra sy faritra maro izay Nanambara ny UNESCO fa lova ara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanana amin'ny maha-olombelona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Frantsa » Fomba fanao amin'ny kuliner any Frantsa
Colmar, tsidiho ny firavaka ao Alsace